होलीमा आँखाको पनि ख्याल गर्ने कि! :: Setopati
होलीमा आँखाको पनि ख्याल गर्ने कि!
सरस्वती भण्डारी चैत १५
'आँखा राम्रो भएपो रंग रमाइलो उमंग
आँखा नै नभए संसार अन्धकार'
प्राय रंगहरुमा विभिन्न रासायनिक विषाक्त पदार्थहरु मिश्रण गरिएको हुन्छ जसले छाला र आँखालाई नोक्सान गर्नुको साथै अन्य संवेदनशील अंगमा असर पुर्याउँछन्। वर्षेनी होलीमा आँखाभित्र रंग अबिर गएर वा लोला आदिले चोट लागेर दृष्टिमा क्षति पुगेको घटनाहरु सुनिन्छ।
रंगहरुको मात्र कुरा नभएर लोलामा विभिन्न किसिमका ढलको पानी, डढेको मोबिल, ग्रिज जस्ता हानिकारक पदार्थको प्रयोग हुने गर्दछ, यो झनै जोखिमपूर्ण हो।
रासायनिक रंगलगायतको उपयोग स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक मानिँदैन, बजारमा पाइने रंगमा माटो, चुन, सिसा, मर्करी जस्ता विभिन्न रसायनलगायत हानिकारक तत्व मिसिएको हुन्छ। जसले गर्दा आँखा बाहिरको छालाको एलर्जी हुने, चिलाउनुका साथै आँखा रातो हुने, सुक्खा हुने, बिझाउनेदेखि लिएर आँखामा घाउसमेत हुनसक्छ।
घाउ निको नभई आँखा पूर्णरुपमा बन्द पनि हुन सक्छ। अझ अहिलेको अवस्थामा र छिमेकी जिल्लाको उच्च तहको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दा जमघट गर्ने रंग दल्ने खालका कृयाकलापहरु गर्नाले कोभिड संक्रमणको जोखिम उच्च हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।
सकेसम्म होलीमा रंग खेल्दै नखेल्नु, यदि खेल्नु परेमा रासायनिक रंगको प्रयोग नगरिकन सुरक्षित किसिमका सुगन्धित घरयासी सामाग्रीहरु जस्ता चिजको मात्र प्रयोग गरी सानो टीका मात्र लगाएर मनाउने।
रंग लगाइसकेपछि अनुहार पखालिहाल्नु पर्दछ। यदि आँखामा रंग परेको खण्डमा तुरुन्तै सफा पानीले आँखा धोइहाल्ने तर मिच्नु हुँदैन। त्यसैगरी लोला हान्ने जस्ता कृयाकलापले गर्दा आँखामा जोडसँग भित्री चोट लाग्ने, आँखा भित्र रगत जम्ने, आँखाको सम्वेदनशील भागहरुमा हानी पुग्नेका साथै आँखाको पर्दा फाट्ने सम्भावना हुन्छ।
आँखामा रंग परेको खण्डमा लगातार सफा पानीले पखाल्दा पनि बिझाउने, रातो हुने, आँसु आउने तथा दृष्टिमा कमि आएमा तुरुन्तै नजिकको आँखा उपचार केन्द्र वा आँखा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। सानो तिनो लापारबाहीले गर्दा आँखा पूर्ण रुपले खराब हुन सक्दछ।
होली मनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरुः
• रासायनिक रंगको प्रयोग गर्दे नगर्ने र बच्चाहरुलाई रंगको पहुँचबाट टाढा राख्ने
• कुनै किसिमको एलर्जी भएका व्यक्तिले रंगको प्रयोग नगर्ने
• रंग पखाल्ने बेला आँखा पूर्ण रुपमा बन्द गरी मनतातो पानीको प्रयोग गर्ने
• रंग खेल्नुपूर्व क्रिम वा तेलको प्रयोग गर्ने
• रंग पानी खेल्दा भुइँ चिप्लो हुने हुँदा सम्यम भएर हिँड्ने
• चस्मा वा आँखा सुरक्षाका साधनहरुको प्रयोग गर्ने
अन्त्यमा, चाडपर्व रीतिरिवाज संस्कृति जोगाउनु र आफ्नो संस्कारलाई कायम गर्नु सबैको अधिकार हो। हरेक चाडपर्वले मानिसको समग्र स्वास्थ तथा विकासमा केही न केही योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ।
यसको महत्व र यसलाई निरन्तरता दिनु सबैको कर्तव्य हो। तर सामाजिक आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा भएको रुपान्तरणसँगै परिवर्तन र परिमार्जन जरुरी छ। एकातिर कोभिड-१९ को चपेटामा परेको बेला अर्को तर्फ होलीमा हुने गरेका नकारात्मक किसिमका व्यवहारले थप जटिलता उत्पन्न गराउन सक्दछ।
यस्तो अवस्थामा सबै जना संयमित भई चाडपर्व मनाऔँ। आँखाको साथसाथै आफ्नो शरीरको ख्याल गरौँ। नियमित रुपमा सफा पानीले आँखा तथा हात मुख धुने गरौँ।
कोभिड-१९ हटिसकेको छैन, होलीले कोभिड-१९ संक्रमणलाई उच्च बनाउन सक्दछ। सबैजनाले आ-आफनो क्षेत्रबाट साबधानी अपनाऔँ।
(लेखक लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान, श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवामा नेत्र सहायकका रुपमा कार्यरत छिन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १५, २०७७, ११:५३:००
गुनको बदला तिर्दा पाएको तनाव
हजुरको कमी हुन्छ नि बाबा
फोक्सोको क्यान्सर र विस्तार
'खै, कहाँ गए सचिव हुँदा दिनमै तीन पटक भेट्न आउनेहरु!'
नेता नै खराब! अनि हामी नि?
विद्यार्थीको स्वास्थ्य ठूलो कि विद्यालय सञ्चालकको नाफा?